‘राष्ट्रपति प्रभावमा पर्नुभयो'
दीपा दाहाल बुधवार, कात्तिक २२, २०७४ 1687 पटक पढिएको
चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर शृंखलाबद्ध अनसन गर्दै आएका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रपति, न्यायालयलाई समेत चुनौती दिँदै पुनः अनसनको चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपतिलक्षित उनको पछिल्लो अल्टिमेटमलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । केसीसँग यिनै विषयमा अन्नपूर्णकर्मी दीपा दाहालका प्रश्नहरू :
गफले होइन, कामले समृद्धि ! 110
प्रचण्ड रौतहट बम काण्डका घाइते आमा छोरा भेट्न अस्पतालमा 8880
केशव स्थापितविरुद्ध घुस मुद्दा 14627